हेमा र इन्स्पेक्टर का’ण्डले लियो नयाँ रुप ! एसपी आईन् पहिलो पटक मिडियामा, कसरि हुदैछ छानबिन ? (हेर्नुस् भिडियो) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/हेमा र इन्स्पेक्टर का’ण्डले लियो नयाँ रुप ! एसपी आईन् पहिलो पटक मिडियामा, कसरि हुदैछ छानबिन ? (हेर्नुस् भिडियो)
बिहीबार दिउँसो महानगरीय प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीका प्रमुख इन्सपेक्टर देवीप्रसाद पौडेलले नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी (जर्नेल) को बचाउमा लागेर बच्चा बोकेकी हिमा श्रेष्ठमाथि ला’ठी बर्साएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको उक्त भिडियो पश्चात इन्सपेक्टर पौडेल निकै आलोचित भएका थिए । पछिल्ला केही समय यता सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल हिमा श्रेष्ठ भैँसेपाटीस्थित नेपाली सेनाका पूर्व जर्नेल हेम खत्रीको घरभित्र उनी सहित अन्य केही महिलाको जमात घरभित्र प्रवेश गरेका थिए ।
१५ बर्षसम्म पुर्व जर्नल हेम खत्रीले माला शाहसँग सम्बन्ध राखेर प्रयोग गरे तर जब अहिले घर लाने बेला आयो एकाएक कहाँ गए कहाँ ? दु:खमा रुमालिएकी सोझी साझी महिला माला शाहले आफुले न्याय पाउँ भनि हेम खत्रीको घर घेराउ गर्न पुगेका थिए । तर जर्नेलको घर घेराउ गर्न पुगेका माला र हेमासहित ६ जना महिलालाई प्रहरी प’क्राउ गरेर ला’ठि पनि बर्साए । जर्नेल खत्रीलाई लुकेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै चण्डी देवीको रुपमा जर्नेललाई ड’रला’ग्दो चे’तावनी दिएकी थिईन् ।
यसै बिषयलाई लिएर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी वृत जावलाखेलकी प्रमुख एसपी दुर्गा सिंहले बच्चा बोकेकी महिला हिमालाई जथाभावी ला’ठी हा’न्ने प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) को जिम्मेवारी खोसिएको बताएकी छिन् । यसै बिषयको बारेमा मिडियामा कुरा गर्दै एसपी सिंहले पूर्व जर्नेल हेम खत्रीले आफु लु’टिएको भन्ने उजुरी दिएको पनि बताएकी छिन् । अ’भद्र व्य’वहार अन्तर्गत हेम खत्रीको घर घेराउ गर्न पुगेका महिलामाथि मुद्दा चलाएको र २ जनालाई छोडीदिएको एसपी सिंहले बताएकी छिन् । उक्त घटनाको बारेमा थप छानबिन भइरहेको उनको भनाइ छ । हेर्नुस् एसपी दुर्गा सिंहसँग गरिएको कुराकानी तलको भिडियोमा :
गत कात्तिक २२ गते शुक्रबार भोलिपल्ट शनिबार ड्युउटीमा फर्किने गरी नारायणहिटीस्थित श्री गोरखबहादुर गणबाट बानियाँटारस्थित डेरामा गएका नेपाली सेनामा कार्यरत पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नं. ३ घलेभञ्ज्याङ नुवाकोटका सैनिक मच्छिन्द्र भण्डारीकै डेरा नजिक करिब दिउँसो साढे ३ बजे ठूलो आवाजमा ब’म पड्केको जसरी आवाज आयो ।
त्यो आवाज नजिकैको नवनिर्मित साढे ३ तलाको घरको छतमा रहेको ट्वाइलेटमा बिजुली बत्ति जडान गर्ने क्रममा इँटा का’ट्ने क्रममा ग्रेन्डर मेसिनको तार एक्कासी हाइटेन्सन लाइनको तारमा छुन पुगी प’ड्कन पुगेको थियो। वि’स्फो’ट मात्रै भएन आ’गोको ज्वा’ला समेत बलेको थियो । भर्खरै डेरा पुगेका भण्डारी हतार हतार कहाँबाट के को आवाज आयो भन्दै घ’टनास्थल तर्फ दौडिएर जाँदा घरको माथिल्लो तलाबाट ५-६ जना मानिस चि’च्या’उँदै तल झरिरहेका भेटिए ।
भण्डारीले हतार-हतार ”के भयो, के को आवाज हो ?” भनि आत्तिएर दौडिरहेका ती मानिसलाई सोध्दा एक जना क’रेन्ट लागेर ज’लिरहेको छ भन्ने खबर थाहा पाउनासाथ ”म बचाउँछु भनी उनी भर्‍याङ उक्लिए। ”भर्खर बनेको घर चिसो छ, क’रेन्ट सर्ट छ” भनि घ’टनास्थलमा जम्मा भएकाहरुले भने तर उनले साहस देखाएरै छाडे । घरभित्र प्रवेश गरेका बहादुर सैनिक जवान भण्डारीले पहिलो तल्लामा मान्छे ज’लेको गन्ध थाहा पाए ।
एक जना मान्छे बिजुलीको तारमा बेरियर आ’गो को ज्वा’ला र धुँवाले अक्सीजन लिन नसकी जीवनको अन्तिम क्षणमा पुगी छट्पटाइरहेका देखे। ज’लिरहेका व्यक्ति लमजुङका देवराज अधिकारीलाई देख्नासाथ पानी र बालुवाको प्रयोग गरी आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए भण्डारीले। देवराजको डडान्लोको भाग, पेट र छातीको भाग सबै ज’लिसकेको थियो ।
सख्त घा’इते ”देवराजलाई बचाउन सकिन्छ” भन्दै एम्बुलेन्सलाई खबर गर्नु भनी तल रहेका मानिसहरुलाई गुहारे तर कोहि माथि आउन तयार भएनन् । कसैको पनि सहायता नपाएपछि उनी एक्लै देवराजलाई उचाल्न लागि परे। केही व्यक्तिको सहयोग लिई घा’इतेलाई सडकसम्म लगि शरीरमा बेरिएको तार निकाली तुरुन्तै ट्याक्सीमा हाली हस्पिटलसम्म पुर्‍याउन सफल भए ।
झन्डै मृ’त्युवरण गर्न पुगेका अधिकारीलाई बहादुर सैनिक जवानले दोस्रो जुनी दिन सफल भएका छन्। हाल घा’इते देवराजको टिचिङ हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ।उनको शरीरको अधिकांश भाग पो’लेको भागको मांसपेसी अ’परेसन गरी खुर्कीई अन्य नज’लेका थोरै भागको छाला निकाली टाँस्ने कार्य भइरहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।